हामीले पहिले देखिनै भन्दै र विश्वास गर्दै आएको यो सुचना र प्रविधीको आधुनिक जमाना हो भन्ने तथ्यलार्इ अझ अरू आत्मसाथ गर्ने सुनौलो मौका हो । यो एउटा यस्तो पल हुनेछ कम्तिमा पनि हामीले हाम्रा महाकवि देवकोटाले लेखेको कविताको एक अंश 'उद्देश्य के लिनू उडि छुनू चन्द्र एक !' को अर्थलार्इ अझ अरू घनिभूत पार्ने अवसर मिल्नेछ । हामीले कर्ममा विश्वास गर्ने हो । फल के प्राप्त होला ? त्यसमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण विषय हुन सक्तैन । जेहोस यसलार्इ 'यो हाम्रो लागि खुशिको कुरा हो ।' भनेर बुझ्नु अहिलेका लागि सर्बाधिक महत्वका विषय हुन आउँछ ।
यो मेरो मात्र अभियान भनेर नबुझिदिनुहोला । किनकी मलार्इ विश्वास छ, देवकोटाले त्यो जमानामा त्रिभुवन विश्वविधालयको स्थापनाका लागि उनका छोराछोरी र नातेदारले पढ्न पाउँछन् भनेर पहल गरेका थिएनन । उनले त्यो दिव्यविचार नेपाली जनताहरूले अन्धकारबाट उज्यालोतिर अभिमुख हुन पाउँलान भन्ने सोचले अगाडि सारेका हुन । त्यसैगरी मैले पनि यो याहु म्यासेन्जरको कन्फरमेशन कल मार्फत देवकाटामा समर्पित एउटा आफ्नो रचना सबै साहित्यप्रेमी मित्रहरूलार्इ सुनाउने र यहाँहरूका रचना मैले सुन्ने सोच लिएर यो कार्यक्रम गरौं न त भन्ने मनशायले परिकल्पना गरेको हुँ । यहाँलार्इ लाग्ला हाम्रा लागि यो समय छोटो भयो । तर मलार्इ लागेको छ, र्इच्छा शक्ति हुने हो भने समयले हाम्रो केहि बिगार्न सक्तैन भन्ने विश्वासलार्इ नेपाली समाजमा स्थापना गर्न सक्ने एक अर्को सुनौलो मौका हामिले प्राप्त गरेका छौं । त्यसैले आउनुस् साथीहरू, हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएर यो अभियानलार्इ सफल पारौं ।
१) आफ्नो याहु ठेगानामा यस कार्यक्रमको याहु ठेगाना laxmijayanti@yahoo.com एड गर्ने ।
२) कार्यक्रममा सहभागि हुनका लागि तोकिएको समयमा अनलार्इनमा आइ कन्फरेन्सका लागि पठाइएको अनुरोध स्वीकार गर्ने ।
३) एकथान हेडसेट पनि आवश्यक हुन्छ ।
- २०६७ कार्तिक १९ गते/तदनुसार ५ नोभेम्बर २०१०
कुन समयमा ?
- नेपाली समय अनुसार दिनको १२ बजे (जतिखेर केहि देशमा स्थानीय समय निम्नानुसार हुनेछ, जस्तो कि नर्वेमा ७.१५ बिहान, बेलायत ६.१५ बिहान, मलेशिया दिनको २.१५, कतार कुवेत बिहान ९.१५, दुबर्इ १०.१५ बिहान)
कार्यक्रम सञ्चालक ?
- नीराजन शिरीष, नर्वेबाट
- याहु म्यासेन्जरमा लक्ष्मीजयन्तीको याहु ठेगानाबाट सञ्चालन गरिने कन्फेरेन्स कल मार्फत । पालैपालो गरी कविता वाचन गरिनेछ ।
यहाँको भूमिका ?
- रचना वाचन गर्ने वा छैन भने श्रवण मात्र गर्ने ।
नोटः यहाँको सहभागिताले अरूलार्इ समेत प्रेरित गर्नका लागि फेसबुकमा खोलिएको कार्यक्रममा समेत सहभागिता हुने जनाउनु होला । जसको लागि यहाँ थिच्नुस । धन्यवाद ।